Dhacdo Naxdin leh:- Gabar Walaasheed ka yar ku dishay Gobolka Mudug - Awdinle Online
Dhacdo xanuun badan oo dadka degaanka iyo qaybaah kala duwan ee bulshada layaab ku abuurtay ayaa ka dhacday Degmada Galdogob, waxaana la sheegayaa in ilaa iyo hadda ay hadal hayeyn ay ka jirto degaankaas.
Faadumo Cabdullaahi Aadan ayaa nafta dhaafisay walaasheed ka yar Naciimo Cabdullaahi Aadan, waxaana dhacdadaasi ay noqotay mid ay si weyn kaag naxeen dadka degaanka iyo qoyska labada Gabdhood ay ka dhasheen.
Sababta keentay in gabdhaani ay walaasheed disho ayaaa lagu sheegay in Gabdhaha eededadood oo dalka Mareykanka ay usoo bandhigaty Reerka Gabadhaha ay ka dhasheen in mid ka mid ah labada gabdhood ay dalka Mareykanka u wadi doonto, balse ay ay qoysku soo doortaan qofka loo wadaayo, waxaana ay usoo doorteen Naciima, waxaana taasi ay keentay in Faadumo ay ka xumaato kadibna ay dil u gaysato walaasheed.
Faaduma ayaa Iskuulka waxaa ay kasoo wadday walaasheed Naciima, waxaana ay gaysay meel iskuulka ka fog halkaasi oo ay 10 meelood Toorreey ka galisay, waxaana ugu dambeytii ay u geeriyootay dhaawac halis ah oo soo gaaray.
Previous articleNISA oo goordhow siideysay Wariye u xirnaa
Next articleJaneraal Ciiro” Al-Shabaab waxay u diyaar garoobeen carqaladeynta doorashooyinka”